Manni Marii Waraana Suudaan fi Paartiileen Siyaasa biyyattii mootummaa ce’umsaa qaamota hunda hammatu hundeessuuf walii galan - NuuralHudaa
Manni Marii Waraana Suudaan fi Paartiileen Siyaasa biyyattii mootummaa ce’umsaa qaamota hunda hammatu hundeessuuf walii galan
On Apr 28, 2019 3
Haaluma kanaan manni marii waraana Suudaan fi gamtaan paartiilee mormitootaa marii guyyaa kaleessaa geggeessaniin, mootummaa ce’umsaa qaamota hunda hammate hundeessuuf kan walii galan tahuu odeeyfannoon ni addeessa. Haata’u malee Waraanni Suudaan mana marii mootummaa ce’umsaa hundaayu keessatti gaheen ol’aanaan akka kennamuuf kan gaafataa jiru tahus, gamtaan mormitoota ammoo yaada kana hin fudhanne.
Haaluma kanaan lakkoofsa bakka bu’oota waraanaa fi siviilotaa mootummaan ce’umsaa hammatuu qabu murteessuuf, akkasumas dhimmoota hafan kanneen biroo irratti mariin Alhada har’aatis kan itti fufe tahuu Aljaziiraan gabaase.
Gama birootiin ammoo Gamtaan Paartiilee mormituu Suudaan “manni marii waraana Suudaan baatii sadi keessatti aangoo mootummaa siviilotaaf dabarsee akka kennu” jechuun yaadaa Gamtaa Afrikaa irraa dhihaate kan hin fudhanne tahuu ibse. Hogganaan National Umma Party Sadiq Al-Mahdi ibsa kenneen, “ gorsa Gamtaa Afrikaa hin barbaadnu, waraanni Suudaan dhimma biyya keenyaa tasgabbii fi malaan geggeessuu qaba” jedhe. Gamtaan Afrikaa Arba’aa dabre dhimma Suudaan irratti wal gahii ariifachiisaa Kaayiroo keessatti geggeessee ture.